Imfihlo ye-ICloud + ayizukufumaneka kwamanye amazwe | Ndisuka mac
UToni Cortes | 08/06/2021 11:00 | IMacOS Monterey
Njengesiqhelo, kwintetho ehlala phantse iiyure ezimbini, Tim Cook kwaye iqela lakhe alinakho ukucacisa ngeenwele kwaye lisayina zonke iindaba eziza kufakwa kwisoftware eyahlukeneyo yazo zonke izixhobo eziya kuhlaziywa kulo nyaka.
Ke kufuneka silinde ukuba sifunde ukuprinta okuhle komnye nomnye ukufumana uluvo olunzulu lomsebenzi ngamnye omtsha, kunye nobubi kunye nobubi bawo. Okwangoku, kwezi "ncwadi zincinci" kukho into esele ibonakele: usasazo lwangasese lubhengeziwe ICloud + ayizukufumaneka kwamanye amazwe ...
UApple ubhengeze izolo kwingcaciso ephambili ye- I-WWDC21 Inkonzo entsha yobhaliso ye-iCloud +. Olunye lweempawu zale nkonzo intsha kukuba isebenzisa itekhnoloji yabucala yokudlulisela kunceda ukufihla ukukhangela kwiwebhu. Kwingxelo ku Reuters, UApple uqinisekisile ukuba eli nqaku alizukufumaneka kumazwe athile, kubandakanya ne China.
Inkampani iqinisekisile ukuba «Ukudluliswa kwangasese»Ayizukufumaneka e-China xa ikhutshelwa uluntu ebutsheni balo nyaka. Ayizukubakho eBelarus, eColombia, e-Egypt, e-Kazakhstan, e-Saudi Arabia, eMzantsi Afrika, e-Turkmenistan, e-Uganda nase-Philippines. I-Apple ichaza oku kusikelwa umda kwizizathu zolawulo loorhulumente belizwe ngalinye.
Udluliselo lwaBucalaUkuhanjiswa kwakhona kwangasese) luphawu olwenzelwe ukunika abasebenzisi olunye uluhlu lwabucala xa ubrawuza kwiwebhu. Inkqubo efanayo naleyo isetyenziswa ziiVPN.
U-Apple ucacisa ukuba xa ukhangela kunye safari Kwisoftware yexesha elizayo, "uKudluliswa kwaBucala" kuya kuqinisekisa ukuba zonke izithuthi ezishiya isixhobo somsebenzisi ziya kubethelwa, ukuze kungabikho namnye phakathi komsebenzisi kunye newebhusayithi endwendwelweyo onokuyifumana kwaye ayifunde, nditsho neApple okanye umnikezeli womnikezeli womsebenzisi. Zonke izicelo zomsebenzisi ziya kuthunyelwa ngokudluliselwa kwi-intanethi ngokwahlukeneyo.
Eyokuqala iya kwabela umsebenzisi a Idilesi ye-IP engaziwa kuxhomekeke kwingingqi yakho, kodwa hayi eyona ndawo sikuyo. Eyesibini ichaza idilesi yewebhu abafuna ukuyityelela kwaye ibadlulisele kwindawo abaya kuyo. Ukwahlulwa kolwazi kukhusela imfihlo yomsebenzisi kuba akukho ziko linokuchonga ukuba ngubani umsebenzisi kunye nokuba zeziphi iisayithi abazindwendwelayo.
Ukuhanjiswa kokuqala kuthunyelwa nge- Iseva yeapile, kwaye eyesibini ngu umqhubi wangaphandle, ngokutsho Reuters. U-Apple khange atsho ukuba yeyiphi into ayisebenzisayo umntu wesithathu, kodwa iReuters ithi inkampani iyakuveza iinkcukacha kamva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » IMacOS Monterey » ICloud + Ukudluliswa kwangasese akuyi kubakho kwamanye amazwe
Iimpawu ezine ezintsha kwi-watchOS 8 eya kuba luncedo kuthi